महिलाहरु सामुहिक दालमोठ उद्योग सञ्चालन गर्दै । | माण्डवी एफएम
प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २६, शनिबार ०९:५५
राजेश जी सी,प्यूठान श्रावण २५
प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ४ कार्कीडाडाँ प्यूठानका महिलाहरुले सामुहिक दालमोठ उद्योग सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनेका छन । गाउँकै ५ जना महिलाहरु मिलेर मिलिजुली दालमोठ उद्योग सञ्चालन गरेका हुन । महिलाहरु घरको चुलोचैकोमा मात्र काम गर्ने र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सक्दैन्न भन्ने पुरुषहरुको बुझाईलाई चिर्दै प्यूठान नगरपालिका ४ कार्कीडाडाँका महिलाहरुले दालमोठ उद्योग सञ्चालन गरि समाजमा उदाहरण दिएका छन ।
गाउँका स्थानीय रेश्मा कार्की,राधीका महतरा,निमा कार्की,गिता कार्की र लक्ष्मी कार्कीले सामुहिक उद्योग सुरु गरेका हुन । उनीहरुले दैनिक १५ किलोसम्म दालमोठ उत्पादन गर्दै आइरहेका छन । उत्पादित दालमोठ स्थानीय बजार विजुवार र जुर्मीमा खपत हुने गरेको मिलिजुली दालमोठ उद्योगकी अध्यक्ष रेश्मा कार्कीले बताईन् । उनी भन्छिन,“उद्योगवाट उत्पादन भएको दालमोठले राम्रै बजार पाएको छ । हामीलाई बजारको कुनैपनि समस्या छैन ।”
नगरपालिका र वडा नं. ४ को सहयोगमा विजुवार भौकामा भएको ७ दिने व्यस्थापन र ५ दिने दालमोठ उत्पादन सम्वन्धि तालिम लिएपछि सामुहिक दालमोठ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन । घरको काममा सिमित रहेका महिलाहरुले सानोतिनो काम गर्दा श्रीमान्लाई गुहार्नुपर्ने अवस्थामा आफै दालमोठ उद्योग सञ्चालन गरेपछि खुसी लागेको उद्योग सञ्चालक महिलाहरु बताउँछन् । घरको कामसगैँ उद्योग सञ्चालन गर्दा आफुमा आत्मविश्वास बढेको उद्योग सञ्चालक राधिका महतराले बताइन् । महतराले भनिन्,“ नगरपालिका र वडा कार्यालयको सहयोगमा हामीले ७ दिने ब्यवस्थापन तथा ५ दिने दालमोठ उत्पादन सम्वन्धि तालिम लिएर सामुहिक रुपमा उद्योग सञ्चालन गरेका हौ ।” उनीले थपिन्, अहिले हाम्रै गाउँमा उत्पादन भएको सामाग्रीको प्रयोग गरि दालमोठ उत्पादन गरेका छौँ ।” सुरुमा ५ जना महिलाले ५÷५ हजार रुपैया लगानी गरी दालमोठ उद्योग सञ्चालन गरेका हुन ।
स्थानीय रुपमै उत्पादन केराउ,चना लगायतका कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी दालमोठ उत्पादन गरेको उद्योगकी अध्यक्ष रेश्मा कार्कीले बताईन् । उनले भनिन्,“ हामीले गाउँघरमा उत्पादन हुने कच्चापदार्थको प्रयोग गरी दालमोठ उत्पादन गरेका छौ,हामीले उत्पादन गरेको दालमोठ सर्वसाधारणमा लोकप्रिय भएको छ ।” गाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न वडाले विभिन्न सामानहरु सहयोग गरेको हो । महिलालाई स्वरोजगार बनाउन तथा उनीहरुको आत्मबल बढाउन तालिम दिएको वडा अध्यक्ष लक्ष्मि प्रकास राजभण्डारीले बताए ।
‘जिल्लामा बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्नेका लागी वडामै ब्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गरिएको वडा अध्यक्ष भण्डारीले भने,‘वडाले ड्राई मेसिन, तौलने मेसिन लगायतका मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराएका छौ ।’ वडाले दालमोठ उद्योगका लागी निशुल्क कोठा उपलब्ध गराएको छ साथै आबश्यक परे अन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन वडा कार्यालय तयार रहने वडा अध्यक्ष राजभण्डारीले बताए ।